Sandesh Prawahडरलाग्दा सपनाहरु किन देखिन्छन् ? - Sandesh Prawah
नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा ७०८ सङ्क्रमित, ९३२ सङ्क्रमण मुक्त।
धुलिखेल को जिपलाइनमा प्रचण्ड रमाउदै।
प्रधानन्यायाधीशले निकास नदिए प्रतिनिधि सभाले उनीमाथि छानबिन गर्नुपर्छ: पूर्वन्यायाधीश फोरम
अब प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान विभागमा कसैले कसैलाई ‘तँ’ नभनी ‘तपाईं’ भन्नुपर्ने।
धानबालीमा पुगेको क्षतिको विवरण संकलन शुरु र विवरण प्राप्त भएपछि राहतका कार्यक्रम ल्याउने तयारी ।
एमसिसी ठूलो अनुदान हो, ऋण होइन त्यसैले यो पास भएरै छाड्छ :प्रधानमन्त्री देउवा
मलेशियाले नेपाल सहित ४ देश माथि लगाएको प्रतिबन्ध हटायो, अब मलेशिया जान पाउने।
डरलाग्दा सपनाहरु किन देखिन्छन् ?
मंगलवार २६ आश्विन, २०७८
एजेन्सी :- सपनाको अर्थ बुझ्न सकिदैन । सपनाहरु राम्रा वा नराम्रो दुवै देखिन्छ । कहिले काँही डरलाग्दा सपनाहरु पनि देख्ने गरिन्छ । प्रसिद्ध लेखक थेरेसा चियुन्गले सपनाको अर्थको बारेमा बताएका छन् । उनले सपनालाई व्यक्तिको व्यक्तिगत वृद्धि र रचनात्मकताको संकेत भएको बताएका छन् ।
सपनामा कसैको मृत्यु भएको देख्नु जीवनमा आउने परिवर्तनको संकेत हो । यसको अर्थ सपना देख्ने व्यक्तिले जीवनमा कुनै कुरालाई अदबिदा भन्नुपर्ने समय आएको संकेत गर्ने थेरेसा बताउँछन् । कुनै काम, जागिर, घर वा सम्बन्धलाई समाप्त गर्नुपर्ने समय आएको बुझ्न सकिन्छ ।
यदि तपाईंले सपनामा आफू गर्भवती भएको देख्नुभयो भने वर्तमानमा गरिरहेको काममा सफलता प्राप्त हुँदैछ भन्ने संकेत हुनसक्छ । नयाँ कुराको सुरुवात हुँदैछ भन्ने संकेत पनि हुनसक्छ ।
जबरजस्ती कसैसँग सुत्नु
सपनामा कसैसँग जबरजस्ती सुत्नुको अर्थ जिन्दगी वा सम्बन्धमा कुनै चिज गुमाउँदै छु भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
भीडमा नाङ्गो हुनु
यदि सपनामा भीडमा नाङ्गो भएको देखियो भने देखावटी प्रवृत्तिलाई त्याग्ने समय आएको भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
परीक्षाको लागि तयारी नहुनु सपनामा परीक्षा आएको तर उत्तर दिन नसकेर आत्तिएको सपना देखिन्छ भने आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्नुपर्ने समय आएको भन्ने बुझ्नुपर्छ । कमजोरीलाई छोडेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय आएको भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
सपनामा अग्लो ठाउँबाट लडेको देखियो भने जिन्दगीमा केही कुराहरु आफ्नो नियन्त्रणबाट बाहिर गएको भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
कसैले पिछा गरेको
वास्तविक जीवनमा कसैसँग भागिरहेको हुनुहुन्छ भने सपनामा उक्त परिस्थितीसँग जुझिरहेको हुनुहुन्छ । कुनै भावना वा जिम्मेवारीबाट भाग्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको सामना गरेर अगाडि बढ्न संकेत दिएको हुनसक्छ ।
प्रवन्धक/निर्देशक - अर्जुन लिम्बू(दीप)
प्रधान सम्पादक - अर्पण मगर 'बुद्ध'
सम्पादक - दीपा मोक्तान
समाचार संयोजक - कृष अर्याल
प्रदेश नं २ - राजेन्द्र महतो